गगन थापा आफै ‘नेता’ बन्ने कि गुटको भर्याङ ? - Durbin Nepal News
गगन थापा आफै ‘नेता’ बन्ने कि गुटको भर्याङ ?
बिष्णुहरि घिमिरे ४ चैत्र २०७६, मंगलवार ११:५७
वर्तमानमा धेरैले आश गरेका नेतामा नेपाली काॅग्रेसका गगन थापा एक हुन् । हरेक विषयमा गुण र दोषको आधारमा उनले गर्ने विष्लेशणले प्रायलाई आकर्षित गरेको हो ।
कतिपय मुद्दामा पार्टी चिप्लिदा पनि गगनले त्यसलाई सच्चाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण नै बालुवाटार जग्गा काण्ड भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा हेरौ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्टी उप–सभापति एवं संसदीय दलका उप– नेता विजय गच्छेदारलाई पनि त्योप्रकरणमा दोषि भन्दै मुद्दा दायर गर्यो । सोही विषयलाई लिएर काॅग्रेसले संसद नै अवरूद्द गर्यो । पार्टी केन्द्रिय कार्यसमिति बैठक पनि गच्छेदार कै पक्षमा जाने तरखर गर्दै थियो तर गगन सहितका केही केन्द्रिय सदस्यको तर्क पछि पार्टी सच्चियो ।
यस्ता थुप्रै मुद्दा छन्, जहाॅ सिंगो पार्टी अलमल हुदै गर्दा गगन थापाले आफ्नो धारणा बनाई सकेका हुन्छन् । वर्तमान नेकपाको सरकार काण्डै काण्डले जेलिएको छ । ईतिहासकै कीर्तिमानी भ्रष्ट्राचारका काण्डहरू एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएका छन् । विजय गच्छेदारको नाममा तीन दिन संसद अवरूद्द गर्ने काॅग्रेस तत्कालिन सुचना तथा संचार मन्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड काण्डमा‘लगभग मौन’ नै देखिएको छ ।
यस अघिका पनि प्राय भ्रष्ट्राचारका काण्डमा काॅग्रेस मौन नै देखिएको हो । भ्रष्ट्राचार र सरकारका अन्य रवैयाका बारेमा काॅग्रेसले मौनबस्दा कतिपय अवस्थामा लाग्छ नेपाल प्रतिपक्षि दल बिहिन छ । ‘उही गगन थापा छन र कहिले काॅही काॅग्रेस भन्ने पार्टी पनि छ’ भन्नेकोसंख्या पनि थपिदै छ । गगन थापा राष्ट्रिय नेता बन्छन कि भन्ने थियो । नेपाली काॅग्रेसको १३ औ महाधिवेशनमा राजीतिक जीवनमाठूलो भूल गरेका उनी यस पटक सच्चिएलान भन्ने लागेको थियो ।
तर ‘कुवाको भ्यागुतो कुवामा नै रमाउछ’ भने जस्तै यस पटक पनि गगनले कृष्ण सिटौला गुट कै फेरो समाउन नछाड्ने भए । गुटको राजनीति बारेमा आम मान्छे भन्दा गगन थापा निश्यच पनि बढी अनुभवि छन् । गुटले पार्टीलाई कुन दलदलमा फसाएको छ र त्यसको असरमुलुक तथा जनमानसमा कसरी परेको छ भन्ने त प्रष्ट नै छ ।
तर पनि खै किन उनी त्यो दलदलबाट बाहिर निश्कन सकेनन् । के बाध्यता हो उनको ? खुल्दुलीको विषय, आखिर हार्ने महामन्रीकालागि गगन थापाले १३ औ महाधिवेशनमा सिटौला गुटबाट किन चुनावमा होमिए ? उनी एक्लै लडेर हारेको भए उनको इज्यत झनै बड्नेथियो, त्यो हुदाॅ उनी आफै नेता बन्ने थिए । ‘आए आप गए झटारो’ भन्ने स्थिती थियो । १२ औ महाधिवेशनमा सबै भन्दा लोकप्रिय मतपाएका गगन १३ औ महाधिवेशनमा एक्लै महामन्रीमा चुनाव हारे पनि जिते पनि केन्द्रिय सदस्य हुने नै थिए । यस्तो सुविधा पाउदा पाउदै उनी सिटौला गुटको नाममा आफ्नै ससुरा अर्जुन नरसिंह केसी सॅग किन भिडे ? एक प्रकारले उनले ससुराको राजनीतिक जीवन पनिलगभग पूर्णविराम नै लगाईदिए ।
नेपाली काॅग्रेसको वर्तमान समिकरणमा कृष्ण सिटौला गुट आफै जित्ने गुट होईन । यो गुटलाई भर्याङ बनाएर अर्को गुट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सक्छ । १३ औ महाधिवेशनमा त्यो भएकै हो । अब फेरि पनि गगन थापा त्यही लाईनमा हिड्ने छनक देखियो ।
गुटले ‘पार्टी क्यान्सर रोगि’ जस्तो भएको छ । नेकपाको सरकार उन्मत्त हुदै गएको छ । लोकतान्रिक गणतन्र दिगो र सक्षम हुन प्रतिपक्षपनि बलियो हुनै पर्छ । चेक एण्ड व्यालेन्स हुनका लागि पनि अहिलेको अवस्थामा काॅग्रेस बलियो हुनै पर्छ । तर काॅग्रेस गुटको झगडामा छ । एउटै झण्डा र एउटै रूख मुनी काॅग्रेसीहरू एकले अर्को सिध्धाउने खेलमा लागेका छन् । त्यसको फाईदा नेकपाको सरकारले लिएको छ । जसको कारण सरकार एक पछि अर्को गर्दै जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने कानुन ल्याउन अग्रसर छ ।
यस्तो स्थितिमा गगन थापा एउटा गुटको लफेदा समाउने कि आफै नेता बन्ने ? गगन थापा आफै नेता बन्ने कि भर्याङ ।
तस्वीर : गगन थापाको फेसबुक प्रोफाइलबाट
४ चैत्र २०७६, मंगलवार ११:५७ मा प्रकाशित